RASMI: Marcus Rashford oo ku guuleystay abaal-marinta laacibka bisha Janaayo ee horyaalka Premier League – Gool FM
(Manchester) 08 Feb 2019. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Manchester United ee Marcus Rashford ayaa ku guuleystay abaal-marinta laacibka ugu fiicnaa horyaalka Premier League bishii la soo dhaafay ee Janaayo.
Dhaliyahan da’da yar ayaa bandhig aan caadi ahayn ka sameeyey kooxda Manchester United bishii hore, waxaana uu ku raaxaysanayaa ka hoos ciyaaridda macallin Ole Gunnar Solskjaer.
Xiddiga xulka qaranka England ee Rashford ayaa dhaliyey 3 gool afar kulan oo uu u ciyaaray kooxda Manchester United horyaalka Premier League bishii la soo dhaafay ee Janaayo.
Dhinaca kale tababaraha ku meel gaarka ah ee Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ayaa isna ku guuleystay abaal-marinta macallinka bisha Janaayo ee horyaalka Premier League.
Waa markii ugu horreysay oo kooxda Manchester United ay bil gudaheed ku wada guuleysato abaal-marinnada macallinka iyo ciyaaryahanka bisha ee horyaalka Premier League muddo 8 sanadood ah.
Sanadkan 2019 macallin Ole Gunnar Solskjaer iyo Marcus Rashford oo ka wada tirsan kooxda Man United ayaa ku wada guuleystay abaal-marinta macallin iyo ciyaaryahanka bisha, halka sanadkii 2011-kii ay wada qaadeen macallinkii hore ee Man Utd Sir Alex Ferguson iyo Dimitar Berbatov.
Macallin Ole Gunnar Solskjaer oo noqday tababarihii ugu horreeyey Manchester United ooo...…